Vary mamy miaraka amina udang | ThermoRecipes
Vary misy menaka mamy
-BARY40 minitraOlona 4350 kaloria
Amin'ny faran'ny herinandro dia tiako ny manao vary, satria ny tsara indrindra amin'ny vary dia ny fihinana azy amin'izao fotoana izao. Ary io dia miaraka amin'ny thermomix, mivoaka miavaka ny vary. Androany dia nankany amin'ny tsena aho ary nahita makamba matsiro atolotra, ka mora ny fanapahan-kevitra: vary manosotra miaraka amin'ny makamba. Ary voalohany, nandray ny a Crème cauliflower, tsara tokoa ny fahatsapany amin'ity hatsiaka ity.
Nampiasako sambo, fa azonao atao ny mampiasa makamba raha tianao na raha vidiny tsara kokoa izy ireo. Ny zava-dehibe dia mividy azy ireo manta ianao satria tianay ny manararaotra ireo akorandriaka a fumet.
1 Vary misy menaka mamy
2 TM21 mitovy
Vary matsiro, vita amin'ny tahiry sakao an-trano ary ampiarahina amin'ny trondro masaka miaraka amina silika masira. Mety amin'ny dingana faharoa.
Voatabia torotoro 80g
Menaka oliva virjina fanampiny 100g
Paprika iray sotrokely
Tahiry 750g (akorandriaka, rano ary menaka oliva 50g)
Volon'osy safron na 1/2 sotrokely fandokoana sakafo vitsivitsy
Isika ny hoditr'omby ary ampidirina ao anaty vera ny loha sy ny akorandriaka. Ampio ny menaka oliva 50 gr sy ny endasina 5 minitra, hafainganana 2, mari-pana varoma.
Manampy rano, sira ary programa 900 gr 15 minitra, maripana 100º, hafainganam-pandeha 2.
Miaraka tsara amin'ny saringan izahay, mitazona ny tahiry ary manadio ny vera.
Ataonay ao anaty vera, ny tongolo, ny tongolo lay ary ny tenan'ireo vono 8 ary voatendry ny voatabia 8 segondra, hafainganam-pandeha 4 hahalavo.
Ampio ny menaka ary endasina 10 minitra, maripana Varoma, hafainganam-pandeha sotro.
Ampio ny paprika sy ny vary ary ny saosy, fandaharana 3 minitra, Varoma temp, hafainganam-pandeha 1, fihodinana havia.
Ampio ny tahiry trondro, sira sy safrona na fandokoana amin'ny vera. Izahay dia manao fandaharana 13 minitra, 100º, fihodinana havia, hafainganana 1. Izahay dia manamarina ny teboka sira. Avelantsika hiala sasatra ao anatin'ny vera rakotra 2 minitra. Manompo izahay.
Nandritra ny roa minitra sisa taom-bary, namboariko ireo udika ary nasiako flakes sira teo amboniny.
Fanazavana fanampiny- Crème cauliflower
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Vary sy Pasta, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, TRONDRO
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » Vary sy Pasta » Vary misy menaka mamy
moncaballero dia hoy izy:
Salama Irene. Tiako ny resinao !! Misaotra betsaka amin'ny bilaogy. Inona no hataonay mivady raha tsy eo izy! Fanontaniana iray: raha te-hanao an'ity vary matsiro ity amin'ny vary volontany aho: hiova ve ny fotoana? ary ny vola? Misaotra betsaka!
Mamaly an'i moncaballero
Salama! Ny fitazonana dia azo tazomina mitovy, fa ampio ron-kena 100 ml bebe kokoa. Na izany aza, manoro hevitra anao aho hanaraka ny torolalan'ny mpanamboatra, satria mety hiankina amin'ny karazam-bary volontany novidinao io. Na izany na tsy izany rehefa manana ilay fonosana ianao, raha manana fanontaniana ianao dia manorata ahy indray, okay? Ary lazao ahy ny fomba mety aminao !! Oroka manja.
Isabel Andres dia hoy izy:
Vary mahafinaritra be dia be, nilaza tamiko ny zanako lahy fa manomboka izao dia tsy te hihinana an'io fotsiny izy. Misaotra betsaka anao amin'ny resipeo ary mahafinaritra anao daholo ny zavatra avoakao.
Valiny tamin'i Isabel Andrés
Endrey ny hafaliana nomenao ahy! Ary mahafinaritra ny tenin'ny zanakao lahy. Tena mahafaly ahy ny hevitrao. Misaotra betsaka anao nanoratra anay sy nanaraka ny bilaoginay. Oroka lehibe.
Salama Irene, vao hitako ity fomba fahandro ity ary toa goavana izany! Amin'ity faran'ny herinandro ity dia hanaporofo aho fa manana vahiny fa te hanontany anao aho raha ho an'ny olona 6 dia mila manampy fotoana bebe kokoa izahay.
Salama Ana, amin'ny resipe-bary, tsy maintsy manova ny habetsany fotsiny ianao fa tsy amin'ny fotoana intsony. Holazainao amiko ahoana !! Oroka sy fisaorana noho ny nanoratany anay.
Tena tsara tarehy. Ny alahelo tsy azo averina intsony !!
Misaotra betsaka amin'ny hafatrao Almudena! Faly be aho fa tianao io 🙂
Valiny tamin'i Vero
Fifaliana re izany ry Vero! Faly be aho fa tianao. Misaotra amin'ny hafatrao 😉
Fanontaniana iray… satria maro ny habe amin'ny makamba sy ny makamba eny an-tsena, firy ny lanjany tokony hampiasaintsika? 300 grama? 600 grama? Mazava ho azy fa ny habe kely dia tsy mitovy amin'ny habe lehibe fanampiny….
Salama Paloma, mba hisorohana an'izay nolazainao, fa indraindray ianao mankany an-tsena ary lehibe na bitika izy ireo, ny ataoko dia ny manisa ny isan'ny sombin-javatra isaky ny olona arakaraka ny habeny. Raha ny amiko, satria lehibe izy ireo miaraka amin'ny 4 isaky ny olona tsy maintsy avelantsika, dia tadidio fa ny lovia lehibe indrindra dia ny vary, fa tsy ny makamba. Manantena aho fa nanampy anao 🙂 Ka raha olona antonony izy ireo dia hametraka 6 isaky ny olona ary raha kely 8 isan'olona, ​​na dia mangataka sambo aza ianao dia mazàna lehibe izy ireo. Azonao lazaina amiko hoe!
Ny tena marina dia lehibe kokoa izy ireo, amin'ny kilao iray dia tsy mifanentana afa-tsy amin'ny 18 fotsiny izy ireo. Hataoko ny antsasaky ny hamaritana hoe ahoana izany, tsy tiako hivoaka mahery ny tahiry. Holazaiko aminao. Misaotra, tsara tarehy! 🙂
Nanao ahoana i Paloma? Na izany na tsy izany, raha hitanao fa mifantoka loatra ny tahiry, dia afaka manampy rano bebe kokoa ianao mandra-pahatongan'ny fanirianao ary hametahana azy amin'ny siny fitaratra. Amin'ity fomba ity dia hanana fumet efa voaomana ianao hanamboatra lovia vary hafa na lasopy trondro. Famihinana!
Ny tena marina dia nahafinaritra, iray amin'ireo lovia vary tsara indrindra tsapako. Kely kely ho an'ny olona 5, heveriko fa amin'ny manaraka dia hampitomboiko ny habetsany satria lehibe kokoa noho ny TM5 ny vera TM31, izay ho an'ny Thermomix izay namboarina ny fomba fahandro, mba hahafahantsika mamerina! 😉
Salama Irene! 🙂
Karazana vary inona no amporisihinao amin'ity resipeo ity?
Salama Pablo, ny vary boribory (toy ny an'ny paellas) dia mihoatra noho izay. Manova marika aho, ka ny hany zavatra tokony ho raisinao dia ny fotoana fandrahoan-tsakafo natolotry ny marika. Hiteny ahy ianao! Misaotra nanoratra anay 🙂
Salama tiako ireo resipeo ary efa vitako intelo, tiako be ny zanako.
Tsy gaga aho Toñi .. mahafinaritra izy!
Vary matsiro, na dia somary zara aza ho an'ny olona 4. Misaotra betsaka amin'ny rosia!
Misaotra !! Tadidio fa azonao atao ny mampitombo ny vola tianao araka ny itiavanao azy, fa mitazona fotoana mitovy hatrany. Miarahaba !!
Nahazo ny thermomix nandritra ny 6 volana aho ary afaka milaza izany fa hatramin'izao ny fomba fahandro nahandro tsara indrindra. Fahombiazana lehibe ary koa mora sy haingana. Efa manana tahiry fanampiny mangatsiaka fanampiny aho mba haka fotoana kely kokoa amin'ny manaraka.
Tena tsara ry Iker! Mazava ho azy ity vary ity ho ahy dia mahavariana ary iray amin'ireo tiako indrindra. Ao an-trano dia manomana azy be dia be ary rehefa manana vahiny isika dia filokana azo antoka! Misaotra betsaka noho ny hevitrao. Manararaotra manao tahiry be dia be koa aho, manala azy ary omaniko amin'ny manaraka 🙂 Fihodinana lehibe !!
Mahafinaritra sy mora atao.
Misaotra Carolina! 🙂
Salama, misaotra betsaka amin'ny bilaoginao. Ao amin'ny fomba fahandro, ampio "ny vatan'ny saosy 8" ary afangaro. Voninkazo ve izy ireo sa diso ny endritsika ary vodin-tsavony 8 no mivezivezy amin'ny 16. Tonga ny fisalasalako satria tsy mametraka udid-tsofina ao anaty akora ireo. Miarahaba.
Salama Joaquín, eny tokoa fa tsy ny udid izy ireo fa ny saho, fa diso ny fanitsikitsika izay vao avy nohamarinintsika. Voaviravira ny sambo 8 amin'ny 16 😉 misaotra anao nanoratra !!
Salama!!. Tsy haiko hoe impiry aho no nanao an'ity recette ity fa tsy ho vitanay izany. Mahafinaritra !!. Nilaza ny zanako fa io no vary tsara indrindra nohanin'izy ireo ary maro no nanandrana satria tiako ny manao azy amin'ny faran'ny herinandro.
Ny fisalasalana ihany, amin'ireo akora apetrakao dia mampiasa rano 750 gr izy fa rehefa manamboatra ny tahiry dia manondro 900 gr. Rehefa ataoko izany dia tsy misy etona manaloka ary mitovy ny lanjako napetrako tao. Iza amin'ireo ny habetsany roa no marina? Ataoko amin'ny 750 izy io mba hampifantoka bebe kokoa ny tsiro ary indraindray miaraka amin'ny 900 hanampiana vary bebe kokoa saingy nanana fisalasalana foana aho.
Mazava ho azy fa fohy dia fohy ho an'ny olona efatra izany ary mahita fa zanaka roa ny roa ... sa hoe tiantsika izany ary tavela ho te hamerina isika, hehe.
Salama Beatriz, misaotra iray tapitrisa amin'ny hevitrao !! Ny tena marina dia iray amin'ireo fomba fahandro mahomby indrindra ao amin'ny bilaogy ... ary ao an-tranon'ny namako! Eny, izay lazainao momba ny ron-kena dia hoe maninona no very mandritra ny etona sy amin'ny fihenan'ny ron-kena, fa mety tsy ho etona firy. Ny torohevitro dia ny hanary azy rehetra. Raha ny marina dia teboka tsara izany ka hanovako ny lahatsoratra dieny izao manaraka ny torolalanao. Afaka manampy be dia be ianao ary mahandro mandritra ny 5 na 6 raha tsy latsaka ny 4. Tokony hampitombo ny habetsaky ny vary sy ny ron-kena ianao, fa ny fotoan'ny fandrahoana ny vary kosa hitovy, okay? Ho lazainao amiko hoe manao ahoana ianao !!
Oroka lehibe ary misaotra anao nanaraka anay 🙂
Efa in-droa no nataoko ary pasty io. Tsy haiko ny antony, miaraka amin'ny tsiro tsara, fa pasty, fa tsy lasopy. Amin'ny broth be loatra?
Salama Jm, tantely ity volom-bary ity, noho izany tsy ho lasopy fa tsy hamelombelona. Na izany na tsy izany, raha tianao ho maivana kokoa izy amin'ny tsy fitoviana, tsy mila manampy 200 g monja fotsiny ianao mandritra ny fandrahoana sakafo. Misaotra nanaraka anay!
Avelako ho anao ity fomba fahandro ity ho an'ny ranon-dranomandry, izay tena ho tianao satria mitoetra ao anaty ron-kena io: https://www.thermorecetas.com/arroz-caldoso-de-marisco/ Manantena aho fa tianao io !! Lazao aminay. Famihina 😉
Holatra feno tongolo lay sy ham
Krim-voatabia miaraka amin'ny tofu